Warar Dheeraad ah oo ka soo Baxaya Ragii Hoobiyeyaasha Maanta ku Weeraray Degmada Wadajir (SAWIRRO)
Ciidamada amaanka ayaa maanta toogasho ku dilay labo nin oo la sheegay in hoobiyaal ay ku garaaceen xaafado katirsan Degmada Wadajir ee gobolka Banaadir, hoobiyaashaasi oo ka dhashay khasaaro naf iyo maalba isugu jira.
Hoobiyaasha qaarkood ayaa ku dhacay Xaafada Ceel Qalaw iyo dhanka Dan wadaagaha, waxaa la sheegay in ay ku dhaawacmeen sadex qof oo shacab, waxaana dadka ku dhaawacmay hoobiyaasha loo qaaday Isbitaalada magaalada Muqdisho.
Ciidamada amaanka ayaa eryaday gaarigii laga soo tuuray hoobiyaasha waxa ay dileen mid kamid ah ragii hoobiyaasha tuuray, ciidamada amaanka ayaan sii ceersaday nin kale oo baxsady kaa oo mar kii dambe guri shacab leeyihiin ku dhax cararay iskuna soo xiray.
Sida aan Wararka ku helnay ciidamada amaanka ayaa hareereeyay gurigii uu galay ninka hubeysnaa kaa oo in mudo ah la dagaalamay ciidamada, waxaana markii dambe goobta soo gaaray Ciidamada gaashaan oo dilay ninkaasi hubeysnaa ee la dagaalamay.
Meydadka labada nin ee ka dambeeyay hoobiyaashii lagu garaacay xaafado katirsan Degmada Wadajir ayaa lagu soo bandhigay goobtii lagu dilay, waxaana halkaasi u daawasho tagay shacabka ku dhaqan xaafadaha Danwadaagaha iyo Ceel Qalow.
Waxaa sidoo kale qarxay gaarigii ay wateen ragan hoobiyaasha ku tuuray qeybo kamid ah Degmada Wadajir, gaariga ayaana la sheegay in ciidamada amaanka gacanta ku dhigeen ka hor inta uusan qarxin.
April 16, 2017 tuugahaladilo2015